Ny fizotran'ny mpisolovava UAE amin'ny fanangonana trosa | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ny solika lehibe sy ny entona, serivisy na trano, indrindra, dia mety hanitatra ny tolotra fandoavana azy ireo fa amin'ny ankapobeny dia mandoa ny vola aloa amin'ny alàlan'ny mpisolovava UAE azy ireo. Ny fihetsika mandoa vola amin'ny orinasam-pirenena dia mety fa kosa tsy mitovy amin'ny sehatra iray. 30 andro ny fepetra fandoavana vola.
Na izany aza, matetika izy ireo dia mitatra hatramin'ny 60 andro. Orinasa kely kokoa (oh: varotra ankapobeny) dia toa tsy manefa ny trosany, ka mamela ny mpampindrana azy tsy hialany vola. Ankoatr'izay, ny ankamaroan'ny fikambanana voarakitra ao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra dia eken'ny tsy tompon-tany izay miparitaka matetika rehefa mipoitra ny olana (ireo mpanao asa soa dia mifandray amin'ny fitantanan-draharahan'ny fikambanana ary tsy atahorana ireo adidy).
“Ny mpampindrana dia manan-jo hitaky zanabola amin'ny indram-bola arak'antoka amin'ny fifanarahana. Raha toa ka tsy voafaritra ao anatin'ny fifanarahana ny zana-bola, dia isaina amin'ny taha-bidy amin'izao vanim-potoanan'ny varotra izao, saingy amin'ity tranga ity dia tsy tokony hihoatra ny 12% mandra-pahatonga ny fandoavam-bola. ”
Fampidinihana momba ny mpisolovava UAE
Na dia eo aza ny fandrosoana hita tato anatin'ny taona vitsivitsy sy ny tanjona mazava hanafainganana ny fanontanian'ny orinasa mifandray, ny mpitsara ny UAE dia manana fahazoan-dàlana betsaka amin'ny fampandrosoana. Na dia ny fitsipiky ny fahaleovantenan'ny fitsarana, ary ny lalàna mifehy ihany koa dia ekena ao amin'ny lalam-pirenena momba ny Lalàmpanorenana, tsy misy fizakan-tena sy fahatokisana amin'ny fampiharana, ka noho izany ny fahazoana ny fanapahan-kevitra tsara momba ny fitsarana dia mijanona ho fampiharana tsy azo antoka.
Tsy azo aleha matetika izany hanomboka hetsika ara-dalàna ho an'ireo mpisolovava UAE eo anatrehan'ny fitsarana nasionaly raha tsy hoe tsy misy dikany ny fitakiana ary lehibe koa ny fahafaha-manao fahombiazana. Noho io antony io, ny fanovana vahaolana am-pilaminana dia tsy maintsy raisina ho toy ny fomba hafa mahomby amin'ny fizotran-dalàna. Alohan'ny hanombohana ny fanenjehana amin'ny fanombanana ny fanombanana ny fananana dia ilaina izany satria mamela ny fanamafisana raha toa ka tsara indrindra ny fotoana famerenana amin'ny laoniny ary raha toa ka mitohy mihetsika ny orinasa. Ankoatr'izay, zava-dehibe ny fahalalana momba ny toe-bolan'ilay mpampindram-bola: raha sendra manomboka ny fizotry ny tsy fandriam-pahalemana dia tsy azo atao ny mampiditra trosa.
Fiaraha-miasan'ny Emirà fito mizara rafitra ara-dalàna mahazatra (amin'ny fisorohana an'i Dubai sy Ras Al Kaimah). Ny lalàna dia aroso amin'ny alàlan'ny fitsarana ao amin'ny Cour Cassation Courts, Courts Apploge, ary amin'ny ankapobeny. Tsy mbola misy fitsarana manokana; Midika izany fa mihaino fifanolanana ara-barotra ny mpitsara tsy manam-pahaizana manokana. Ankoatr'izay, zava-dehibe ny fanekena ny fitsarana eo an-toerana izay mendrika amin'ny raharaham-pirenena rehetra nampitomboin'ny orinasa voasoratra anarana ao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra, avy amin'ny Freezone 'Powers (toy ny Dubai International Financial Center) izay mampiasa fitsipika miavaka (mifototra amin'ny lalàna mifehy) ary noho izany dia mendrika amin'ny tranga napetrak'i orinasa voasoratra anarana ao amin'ireny faritra afakaba ireny fotsiny.
Ny fihazakazahana ara-dalàna dia tokony atomboka amin'ny antontan-taratasy Takiana ny Mpisolovava UAE mahatsiaro ny mpitrosa ny adidiny ny manarona ny sefo.
Ny fifamaliana dia tsy maintsy vahana amin'ny alàlan'ny fitoriana mahazatra alohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany, raha misy ny fitoriana napetraka. Rehefa natao tsinontsinona ny fanangonana am-pitiavana nefa raha narahina ny fanatanterahana dia tokony hanomboka ny hetsika ara-dalàna mahazatra tokony hialana. Hiampanga miaraka amin'ny fitsarana ny mpitory iray, izay hanefa ny fiantsoan'ny trosa. Ity farany dia angatahina hametraka valiny, ary ny ankolafy taorian'io fifanakalozana hevitra io dia nanoratra hevitra fa ny fitsarana ny raharaha UAE dia an-tsoratra, saika tsy misy fihainoana am-bava amin'ny raharaha sivily. Tsy ilaina intsony ny milaza azy, ny fizotrany rehetra dia atao amin'ny teny Arabo, ary ny rakitra rehetra dia tokony hadika.
Matetika ny fitsarana dia mamoaka vahaolana amin'ny karazana fampirantiana manokana ary fanararaotana onitra. Na izany aza, ny fanamaivanana injunction dia tsy manokatra ny UAE tsotra izao raha toa ka tsy mora ny mandresy lahatra ny fangatahana fitetezana: tsy maintsy misy ny tranga voalohany amin'ny fahitana mifanohitra amin'ny valinteny miaraka amina loza mety hitranga ny fangatahana fanangonana dia tsy hanana fahaizana mampihatra ny fanapahan-kevitra. Amin'ny fampiharana, tsy mora ny mahazo an'io karazana fitiavana io mifanohitra amin'ny fananan'ny teratany UAE na orinasa UAE satria tsy mora ny manamarina ny mety hahafoana ireo fananana ireo. Amin'ny tranga tsy fahita firy, ny litigant dia tsy afaka mamerina ny simba amin'ny sazy vokatr'izany ary / na.
Fanontaniana mikasika ny fatiantoka: inona ny fandrosoana?
Na izany aza, ny fatiantoka iray any UAE dia mirona tsy mifanaraka amin'ny fenitra iraisampirenena amin'ny dikany fa ny fizotran'ny famonoana olona ihany no azo ekena. Ny orinasa dia misy ifandraisany amin'ny olan'ny fanomezam-boninahitra azy manokana, ary fenitra ihany koa ny fametrahana fiampangana heloka bevava ataon'ireo mpampindrana, ho solon'ny fianteherana amin'ny bankiropitra mpisolovava sy ny fizotrany aorian'ny fitsabahana. Vokatr'izany, ny mpampindram-bola dia manana famporisihana lehibe hitondra vola amin'ny alàlan'ny lalana iray izay mivantana fa tsy misy fotoana sisa tavela ho an'ireo orinasa mpitrosa.
LOHARANOM-BAOVAO: Manolotra atolotry ny banky an'habakabaka UAE ny Lifeline hiady amin'ny orinasa miady
Rahoviana no handefasa fatiantoka?
DUBAI – Nanaiky ny hamatsy ny tolona ataon'ny fanjakana amin'ny orinasa madinidinika sy antonony mba hamerenana ny trosany ny banky ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra satria ny vidin-tsolika ambany dia manelingelina ny tsenan'ilay faritra.
Amin'ny alàlan'ny drafitra izay nofintain'ny iray tamin'ireo mpampindram-bola ambony ao amin'ny firenena, ny mpampindram-bola any an-toerana dia mamela ny SME eo amin'ny olana ara-bola nefa tsy miatrika hetsika ara-dalàna haingana hamerenany ny fampindram-bola.
Ny SME dia mitentina manodidina ny 60% amin'ny tsenan-tsolika tsy any Etazonia, araka ny vinavina sasany. Betsaka no miady hatramin'ny nanombohan'ny fihenan'ny vidin-tsolika ny afovoan'ny taona 2014, ka nahatonga ny fanapahana manapaka sy ny mpanjifa tsirairay na ny fanemorana ny fandoavam-bola satria mitombo haingana kokoa ny tsena isam-paritra.
"Izany no atao hoe insolvency: omeo fotoana ny client ary omeo ny toeran'ny mpanjifa nomena izay nataony," hoy izy.
Ny UAE dia tsy manana lalàna mifehy trosa tanteraka sy mpandraharaha sesitany manao fahadisoana amin'ny adidy nandositra ny fanjakana hisorohana ny fiampangana heloka bevava. Ny tompon'andraikitra nandritra ny taona maro dia nilaza fa hanangana lalàna momba ny tsy famindram-bola izay mety misy fehezan-dalàna momba ny fatiantoka izay niavaka nefa toa namboarina ela ireo paikady ireo.
'Mino aho fa izay napetrakay teo ambony latabatra dia lalàna mifehy ny tsy famindram-bola.'
"Mila ambarantsika izao tontolo izao [fa] ny banky mihitsy dia mametraka safidy eo amin'ny latabatra mavitrika," hoy izy. "Fahatakarana ara-moraly izay harahin'ny banky rehetra io," hoy izy.
Amin'ny ankapobeny, na dia ny lalàna aza dia azo ekena ho fampidiran'ny manam-pahaizana manokana raha toa ka manome mekanika trosa famerenana ny fifampiraharahana, na izany aza dia mijanona ho tsy voasedra amin'ny fampiharana izany. Mampiahiahy ihany ny momba ny fizotran-drakitra fanamorana, hany ka araka ny voalaza tetsy aloha, ny "fandosirana" no fomba fanao matetika indrindra rehefa miatrika olana ara-bola ny orinasa. Na izany aza, raha misy antony marim-pototra hametrahana bankiropitra dia ataovy izay azonao atao farafaharatsiny mba hahazoana zavatra amin'ny fampiasam-bolanao. Ny firosoan'ny lalàna any Dubai, Emirà Arabo Mitambatra dia vonona ho an'ireo karazana tranga ireo. Ny orinasan'ny lalàna any Dubai dia manakarama masoivoho mpanangona trosa mba hanampiana ny mpanjifany amin'ny trosa ary manangona trosa amin'ny alàlan'ny fitarihan'ny lahika UAE.